musha Vatambi Bio Jennifer Lopez Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Yedu Jennifer Lopez Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peKudiki kwake Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Vakomana, Varume, Vana, Mota, Net Kukosha, Lifestyle uye Hupenyu Hwega.
Muchidimbu, iyi ndiyo Hupenyu Hupenyu yeiyo American mutambi, muimbi, mutambi, fashoni dhizaina, mugadziri, uye bhizinesi mukadzi. Inotanga kubva pamazuva ake eusikana, kusvika paakazova nemukurumbira.
Hongu, munhu wose anoziva nezvehutano hwake asi vashomanana vanofunga nezve Jennifer Lopez's Bio yedu, iyo inofadza chaizvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Jennifer Lopez Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Kune ekutanga Biography, iye ane zita rezita 'J.Lo'. Jennifer Lynn Lopez aive akazvarwa pazuva re24th raJuly 1969 muCastle Hill, New York City.
Akazvarwa kuna amai vake, Guadalupe Rodríguez, uye baba vake, David Lopez. Vabereki vese vakaberekerwa muPonce, Puerto Rico, iro rechipiri pakukura guta rePuerto Rican.
Jennifer Lopez Hupenyu hwepakutanga:
Apo Lopez akaberekwa, mhuri yaigara muimba duku. Makore mashomanana gare gare, vabereki vake vakanga vachengetedza mari yakakwana kuti vave nekwanisi kutenga imba yemadzitekiti maviri, iyo yaifungidzirwa sehomwe huru yemhuri yakashata.
Sangana naJennifer Lopez Mhuri mumakore ake ekutanga.
Pazera remakore mashanu, Lopez akatanga kutora zvidzidzo zvekuimba nekutamba, izvo zvakamuona achibudirira pakati pevezera rake. Akashanyira New York nechikoro chake paaiva nemakore manomwe.
Kare kumashure, vabereki vake vakasimbisa kukosha kwemaitiro ebasa uye kugona kutaura Chirungu.
Vakakurudzira vanasikana vavo vatatu kuti vapote vachiridza pamba - vachiimba nekutamba pamberi pavo nevamwe vavo kuti vagare "Kubuda mumatambudziko".
Kuchikoro, Lopez akaita jimunasitikisi, akamhanya nhanho padanho renyika, uye aive nhengo yechikwata chechikoro chebhora. Akabudirira mumitambo kwete pakudzidza, achikwikwidza mumakwikwi enzira dzenyika.
Lopez akapedza rake rese basa redzidzo muzvikoro zveKaturike, achipedzisa kuPreston High Chikoro chinova chikoro chevasikana vese.
Jennifer Lopez Biography - Mugwagwa weMukurumbira:
Ndichiri kuenda kugore rake rekupedzisira rechikoro chesekondari, Lopez akadzidza nezvekukanda bhaisikopo kwaitsvaga vasikana vechidiki vanoverengeka mabasa madiki.
Akaongorora uye akakandwa mukati My Little Girl (1986), iyo bhadhiyo yebhadhiyo yakanyorwa yakanyorerwa naConnie Kaiserman. Jennifer Lopez akatarisa akanaka kwazvo uye anofadza mumakore ake ekuyaruka.
Lopez akaita saMyra, mukadzi wechidiki ari pakati pevasikana vane dambudziko. Mushure mekupedza kutora basa rake mumufirimu, Lopez akaziva kuti aida kuva "Nyeredzi inozivikanwa yemamuvhi". Vabereki vake vasingateereri vakaramba chido chake.
Kuti afadze vabereki vake, zvakadaro, akanyoresa kuBaruch College, achingodzikira mushure memesester imwe. Panguva ino, akasiya zvedzidzo yaive isiri yake yekufona.
Jenny akaenderera mberi nekuudza nekutsvaga rutsigiro kubva kuvabereki vake nezve kurota kwake kwekuve nyeredzi yemufirimu, asi vakasimbirira kuti yaive "Benzi chairo" pfungwa uye izvozvo "Hapana Latinos akaita izvozvo" Uku ndiko kwaive kutanga kwematambudziko emhuri.
Jennifer akasiya imba yemubereki wake. Akaenda kuManhattan kunodzidza kutamba uye dzimwe nguva airara mu studio yaaidzidzira.
Hazvina kutora nguva refu asati ajekesa kuti anga asiri zvachose pamba pemhuri yake nekuda kwekusiyana kwemaonero. Akaramba akagwinya panguva iyoyo.
Jennifer anga agara ari mukadzi akagwinya. Zita rake remadunhurirwa kumajimu raive "La Guitarra" nokuti muviri wake wakanyenyeka segitare.
Jenny akamhanyisa nzira yake kuburikidza nekuita kwedunhu zvigadzirwa. Luck rakauya sezvaakafamba muEurope kwemwedzi mishanu. Akazowana basa kuJapan, kwaakaita sedhanzi, muimbi, uye choreograph pashoo. Synchronicity.
Kuputsa kwake kukuru kwaiva pamakwikwi eTV “Mune Ruvara Runorarama” kwaakanga ari mumwe wei "Bhururuka Vasikana." Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Jennifer Lopez Hupenyu Hwemhuri:
Sezvambotaurwa, vabereki vaJennifer Lopez vanobva kuPuerto Rican. Anobva kumhuri isingatendi mukunwa doro.
Ivo vaviri vakaunzwa kukondinendi United States panguva yehudiki hwavo uye, pakupedzisira, vakasangana vachigara muNew York City.
Baba vake David akashanda nguva yehusiku ku Guardian Inishuwarenzi Kambani asati ave nyanzvi yemakomputa pafemu. J.Lo anotaura zvakanaka nezvababa vake nguva dzese, sezvaakataura nezwi rake,… "Aingodada neni."
Akataura zvakare kuti kana zvasvika kune vanhu muhupenyu hwake vanonyatsomunzwisisa, baba vake ndivo vari pamusoro. "Anofungisisa chaizvo zvandiri kuenda kuburikidza neicho chaicho chandinazvo," iye akambotaura.
Amai vaJennifer Lopez Guadalupe aimbova mudzidzi wemusha uye mudzidzisi muWestchester County, New York.
Iyo Yakanaka: Guadalupe zvirokwazvo ndiamai vane rombo rakanaka kubva muBlock, kana zvingave zvakadaro nekuti ivo amai vaJLo? Ndiani anoziva.
Wanga uchiziva here .. .. Nemadhora matatu chete kubhejera Guadalupe akahwina $ 3-miriyoni jackpot paBorgata Casino muAtlantic City, New Jersey muna Kubvumbi 2.4. Ichi chaicho chivimbo chega kunyaya yembudzi yake.
SISTERS: Ndiye ari pakati pevatatu vanodzingwa-mumhanzi. Mukoma wake mukuru Leslie Lopez, munhu anogadzira imba.
Lynda Lopez ndiye hanzvadzi diki kuna Jennifer Lopez. Iye ndiDJ uye mutori venhau pamangwanani nhau anoratidza muteresi kuNew York's Channel 11.
Jennifer Lopez Noa Ukama:
Kubva munaFebruary 22, 1997, kusvika munaJanuary 1998, akanga akaroora mucheki weCuban Ojani Noa.
Muchato wacho waive mupfupi. Mushure mekurambana, Jennifer akatsungirira matambudziko mazhinji epamutemo nezvehukama hwake naNoa.
MunaEpril 2006, akamhan'arira kuti amudzivise kuburitsa bhuku nezve muchato wavo, achipokana kuti rakatyora chibvumirano chavo chekuvanzika.
Gore rinotevera, mutongi anogadza mudare akabudisa mutemo usingaperi unorega Noa kubva "Kushoropodza, kushora, kukanda zvisizvo kana kuzvidza" Lopez.
Akapihwa madhora mazana mashanu nemakumi mashanu nemakumi mashanu emadhora ekubhadharisa mari uye Noa akarairwa kuti ape ese makopi ezvinhu zvine chekuita nebhuku kuna Lopez kana gweta rake.
Gare gare, imwe mhosva yakanangana nekukanganisa yega vhidhiyo yemuchato muNoa yakauya.
Jennifer Lopez Sean Combs Ukama:
Paanenge achishanda paari yekutanga album, Pane 6, Lopez akatanga kufambidzana mugadziri werekodhi uye rapper Sean Combs, uyo anozivikanwa zvakare nezita rekuti Puff Daddy.
Musi waZvita 27, 1999, vaviri vacho vakasungwa pamwe nevamwe vaviri zvine chekuita nekupfura kunze kweTime Square Club muNew York.
Vakapomerwa mhosva yekupara chombo pamwe nezvinhu zvakabiwa. Lopez akakurumidza kusunungurwa, asina kana chekuita nemhosva. Zvisinei, Combs akapomerwa ndokupomerwa mhosva nedare guru redare reManhattan.
Jennifer Lopez Cris Judd Ukama:
Mushure mekusiya maCombs, Lopez akatanga hukama neaimbove mutambi wekuchengetedza Cris Judd, waakaroora kubva munaGunyana 29, 2001, kusvika munaJune 2002. Jennifer akasangana naye achitora vhidhiyo ye "Rudo Hautore Chinhu"
Akanga akabatanidzwa kwaari kunyange achiri kufambidzana P. Diddy Combs. Jennifer naCris Judd vakarambana mushure memwedzi ye9 yewanano.
Jennifer Lopez Ben Affleck Ukama:
Kutevera kurambana kwake kwechipiri nekuda kwekusiyana kusingagadzirisike, akatanga hukama hwepamusoro nemutambi uye director Ben Affleck, waakazvipira munaNovember 2002.
Vhidhiyo vakatanga kutaurira kwavari se "Bennifer" sezvo vadikani vese vaionekwa sevakanyanya kuroora.
Zvechokwadi, Bennifer rakave izwi rakakurumbira iro rakawana nzira yaro kupinda mumadikishinari emumaguta seakakurumbira. Vese vadikani vakaputsa mu2004.
Jennifer Lopez Marc Anthony Ukama:
Kutevera kuputsa kwake naAffleck muna Ndira 2004, Lopez akatanga kufambidzana neshamwari yakareba kwenguva refu Marc Anthony ane zita chairo anonzi Marco Antonio Muñiz.
Vaviri ava vakachata muna June gore iroro uye aigara muBrookville, New York. Yaiva Marc uyo akamupa zita rezita "Lola."
Musi waNovember 7, 2007, panguva yehusiku hwekupedzisira hwekufambidzana kwavo, Lopez naAnthony vakasimbisa zviri pamutemo kuti vaitarisira mwana wavo wekutanga.
Chiziviso chakapera mwedzi yakati wandei yekufungidzira nezve nhumbu. Lopez akabereka mapatya; mwanakomana, Maximilian David, nemwanasikana, Emme Maribel, muLong Island, New York, muna Kukadzi 22, 2008.
Mapatya aya akaiswa muChris 11, 2008, nyaya ye vanhu, iyo iyo magazini yakabhadhara yakashumwa $ 6 mamirioni; iyo mifananidzo yemapatya yakave yakanyanya kudhura mifananidzo yevakakurumbira yakambotorwa panguva iyoyo.
Makore matatu gare gare, muna July 2011, vaviri vacho vakazivisa kuparadzana kwavo, naAnthony vachinyora kurambana muna April 2012. Kurambana kwavo kwakapedzwa musi waJune 16, 2014, naLopez achichengetedza kuchengetedzwa kwekutanga kwevana vaviri.
Musi waZvita 31, 2014, akachinja zita rake zviri pamutemo kuna Jennifer Lopez, achidonhedza zita rekupedzisira raAnthony 'Muñiz'.
Jennifer Lopez Biography Chokwadi -Post Mac Anthony:
Lopez aive nehukama hwekubuda-pamwe neaimbove mutambi wekuchengetedza Casper Smart kubva Gumiguru 2011 kusvika Nyamavhuvhu 2016.
MunaFebruary 2017, akatanga kufambidzana aimbove mutambi weNew York Yankees baseball Alex Rodriguez.
Jennifer Lopez Untold Biography Chokwadi - Kubudirira uye Mubairo:
In 2012, Forbes akazvimirira iye seMasimba akakurumbira zvikuru munyika yose, uyewo 38th mukadzi ane simba zvikuru munyika yose.
Lopez inoramba iine mukadzi mucherechedzi wega wega ane album imwe chete uye firimu panguva imwechete muUnited States.
Neyechipiri album studio J.Lo (2001), Lopez akazova mukadzi wekutanga kurekodha muimbi pasi peEpic Records kuti awane imwe album muUnited States kubvira payakatanga muna 1953.
The Remixes ye album yake 'J kusvika tha LO! yakagamuchirwa neGuinness World Records seyekutanga nhamba imwe remix album muUnited States.
Muna 2010, Lopez akaremekedzwa neWorld Music Awards neLegend Award yemupiro wake kuunyanzvi.
Akadzokera mukurumbira gore rakatevera aine iye asina kuroora "Pauriri" iyo yaive yakarongerwa seyi yakatengesa zvakanyanya imwe yenguva dzese, uye vhidhiyo yayo yemimhanzi yakazivikanwa seye "Akanyanya Kuonekwa Mukadzi Mimhanzi Vhidhiyo Yese Nguva" by Guinness World Records muna 2012.
Izvo zvaionekwawo seimwe yeakanyanya kudzoka emimhanzi munhoroondo.
Kunze kwevaraidzo, anofarira basa rakabudirira rebhizinesi rinosanganisira dzakasiyana mbatya mitsara, zvishongedzo, zvinonhuwira, kambani yekugadzira, uye hwaro hwekupa, pakati pezvimwe zviitiko.
Lopez akambotsigira Mutungamiri Barack Obama's 2012 mushandirapamwe wemutungamiri wenyika, achitaura mumashambadziro eterevhizheni uye kuenda pachiitiko chekutsvaga mari kwaObama muParis.
Akatsigirawo mutungamiri wenyika yeDemocratic Hillary Clinton mu 2016, achitungamirirwa nehurukuro huru muFlorida pakutsigira kwake.
Zvinosuruvarisa, Hillary Clinton akarasikirwa nesarudzo kuna Donald Trump.
Tinokutendai nekuverenga yedu Jennifer Lopez Yemwana Nhau uye untold biography chokwadi. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa.
Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana kubvunza isu!
Chinyorwa ichi chakandibatsira chaizvo